Shiinaha 8-16mm dhoobada dhoobada dhoobada ee Warshadaha iyo Warshadda | Xinzheng
Ceramsite, sida magacu tilmaamayo, waa walxaha dhoobada. Inta badan astaamaha muuqaalka ceramite waa goobo wareegsan ama oval ah, laakiin sidoo kale waxaa jira qaar lagu daydo ceramites dhagax la jajabiyey oo aan wareegsanayn ama dhinacyo leh, laakiin si aan joogto ahayn loo jajabiyey.
Qaabka ceramite -ku wuu kala duwan yahay iyadoo ku xiran habka. Dusha sare waa qolof adag, oo ah dhoobada ama dhaldhalaalka, taas oo leh saamaynta haynta biyaha iyo gaaska oo siisa ceramite xoog sare.
Cabbirka walxaha ceramite guud ahaan waa 5-20mm, cabbirka walxaha ugu weynna waa 25mm. Ceramsite guud ahaan waxaa loo isticmaalaa in lagu beddelo quruurux iyo dhagaxyo la taaban karo.
Iftiimintu waa barta ugu muhiimsan ee sifooyinka badan ee aadka u fiican ee ceramite, sidoo kale waa sababta ugu weyn ee ay u beddeli karto ciidda culus. Qaab dhismeedka gudaha ee ceramite waxaa lagu gartaa micropores-ka malabka oo kale ah. Dalooladan waa xiran yihiin, iskuma xirna. Waxaa lagu sameeyaa gaaska lagu duuduubo qolofka, taas oo ah sababta ugu weyn ee miisaanka fudud ee ceramite.
Qaybta ugu fiican ee ceramite waxaa lagu magacaabaa dhoobada. Gudaha ceramite -ka, waxaa ku jira walxo badan oo ganaax ah oo ka yar 5 mm. Soosaarka, mashiinka wax lagu shaandheeyo ayaa loo isticmaalaa in lagu baaro walxahaan wanaagsan, oo caadiyan loo yaqaan ceramite. Ciidda dhoobada waxay leedahay cufnaan xoogaa ka sarreysa iyo xasilooni kiimiko oo wanaagsan. Ciidda dhoobada waxaa inta badan loo adeegsadaa in lagu beddelo ciidda webiga ee dabiiciga ah ama ciidda buurta si loo diyaariyo shumac guud oo khafiif ah iyo hoobiye fudud. Waxa kale oo loo isticmaali karaa isku -darka ganaaxa ee aashitada iyo shubka shubka u adkaysta. Noocyada ugu waaweyn waa dhoobada dhoobada dhoobada ah ee ciidda dhoobada dhoobada iyo duuli ciidda dhoobada dhoobada. Ujeedada isticmaalka ciidda dhoobada ah ayaa sidoo kale ah in la yareeyo miisaanka dhismaha. Ciidda dhoobada ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa beerista carrada aan lahayn iyo sifeynta warshadaha.
Shubka Ceramsite ayaa si baaxad leh loogu isticmaalay noocyada kala duwan ee qaybaha hore iyo mashaariicda la taaban karo ee ku jira dhismayaasha warshadaha iyo kuwa madaniga ah (sida kuwa hore iyo kuwa aan horay loo arag, dhismayaasha xamuulka qaada ama xirmooyinka, dahaarka kuleylka ama aan la awoodin, culeyska ma guurtada ah firfircoon Ku jira). Ceramsite ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa qalabka kale ee dhismaha sida dahaarka tuubooyinka, dahaarka jirka ee foornada, dahaarka qabow, dahaarka dhawaaqa iyo nuugista dhawaaqa; waxa kale oo loo isticmaali karaa sida sariirta ciid la'aanta ah iyo walxaha sifeynta biyaha ee beeraha iyo jardiinooyinka.
Sababtoo ah ceramite -ku wuxuu leeyahay qaab -dhismeed khaas ah oo cufan, culeys khafiif ah iyo xoog sare oo dusha sare ah, waxaa loo adeegsadaa jaridda dhirta iyo cagaarka gudaha si loo daboolo baahiyaha dhirta ee nuxurka biyaha, isla mar ahaantaana la kulmo shuruudaha hawo -qaadista hawada, gaar ahaan astaamaha oo aan lahayn boodh iyo miisaan fudud. Waxaa si isa soo taraysa loogu dabaqay beerista dhirta qurxinta gudaha.
3.Qalabka shaandhaynta warshadaha
Qalabka firfircoon ee ceramicite ayaa sidoo kale si weyn loogu isticmaalaa warshadaha. Qalabka shaandhaynta ceramite-ka bayoolojiga waxaa loo adeegsan karaa sida xambaaraha xuubka noolaha ee balliga shaandhaynta bayoolojiga ee culeyska sare leh ee biyaha wasakhda warshadaha, ilaha biyaha wasakhaysan ee biyaha tuubada, shaandhaynta bayoolojiga ee hore loo daweeyey, maaddada caatada ah ee biyaha wasakhaysan , barkinta cusbi ee isweydaarsiga ion, iyo noolaha noolaha Kaydinta qalalan; ku habboon daaweynta sare ee biyaha la cabbo, waxay awood u leedahay inay xayeysiiso waxyaabaha waxyeellada leh, bakteeriyada, iyo biyaha macdanta ku jira jirka biyaha. Waa walxaha shaandhaynta leh saamaynta ugu wanaagsan ee nooleynta ee walxaha waxyeellada leh, iyo sidaha ugu wanaagsan noolaha biofilter -ka
Hore: hawo qallalan budada dhoobada dhoobada ee iibka ah
Xiga: jumlada Cufan ee Perlite ee Madaafiicda Daboolista Kulka
Budada dhoobada Alumina
Guddiga Nadiifinta dhoobada
Nadiifinta Dhoobada ayaa Hoos u Dhacda
Microspheres dhoobada dhoobada dhoobada dhoobada macdanta dhoobada
Rinjiga Microspheres dhoobada
Powder Ceramic Oxide
Qiimaha budada dhoobada
Budada dhoobada ee Iibinta
Powder Ceramic Online
Isku Darka Ciidda Dhoobada
Dhoobada iyo dhoobada
Qalabka dhoobada ee dhoobada
Alaabta dhoobada dhoobada
Dhoobada ilaa Dhoobada
Dhoobada loo isticmaalo dhoobada
Powder dhoobada neceb
Microspheres dhoobada godan
Dhoobada dhoobada ee Kaolin
Dhoobada Kaolin ee Dhoobada
Kaolin oo ku jirta dhoobada